उमेशजी, नयाँ जोगीले जस्ताे धेरै खरानी घस्नुभयाे कि! – Health Post Nepal
२०७८ साउन २१ गते ११:११
नयाँ स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले आफू र आफ्नो मन्त्रालयले आउने १०० दिनको कार्ययोजना बयान गर्दै आफ्नो पनि बखान गर्नुभएको छ- ‘म सुरक्षाकर्मीबाहेक राज्यमन्त्री पदका लागि पाउने राज्यप्रदत्त अन्य कुनै सुविधा लिन्न’, भनेर।
उमेशजी! नयाँ जोगीले आफूलाई विशिष्ट र अरुभन्दा पृथक देखाउन अलिक बढी नै खरानी घस्ने गर्छ। तपाईंले पनि यस्तै परम्पराको निर्वाह गर्नुभयो। मलाई कुनै आश्चर्य वा सुखद अनुभूति भएन। म लगायत अनेकौं देशवासीलाई तपाईंको यस गर्वोक्तिभन्दा कर्णप्रिय के हुने थियो भने तपाईंले पत्रकार सम्मेलनमा दाबी गरेको मोडेर्नाको ४० लाख, फाइजरको ४० लाख, जोनसन एण्ड जोनसनको ५० लाख तथा एस्ट्राजेनेकाको २० लाख भ्याक्सिन के कति दाममा किन्न लागेको हो त्यो सार्वजनिक गरेको भए।
तपाईंभन्दा पूर्ववर्ती सरकार र त्यसका मन्त्रीले पनि ऐस्ट्रेजेनेका र चिनियाँ भेरोसेल भ्याक्सिन (अनुदान बाहेक) किनेका थिए, जसको ‘होम डेलिभरि’ भइसकेको छ। तपाईंले केही दिनभित्रै १६ लाख भेरोसेल र १६ लाख एस्ट्राजेनेका खोप आइपुग्ने जानकारी दिनुभयो। यी दुवै खोप पूर्ववर्ती सरकारले कतिमा किनेका थिए र तपाईंको सरकार कतिमा किन्न गइरहेको छ त्यसको जानकारी पाए पो जनताले परिवर्तनको कुनै अनुभूति गर्ने अवसर पाउने थियो।
माननीय राज्यमन्त्री श्रेष्ठज्यू! तपाईंको नियुक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्री पत्नीको भूमिकालगायत अन्य जे जति हल्ला व्याप्त भए पनि यस देशमा केही मानिस छन् जसलाई थाहा छ, पर्दा पछाडिको यस खेलमा विश्व स्वास्थ्य संगठनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मेडिकल माफियाको गतिलो चलखेल। उनीहरुलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कर्पोरेट जगतको प्रतिनिधित्व चाहिएको थियो, तपाईंबाट त्यो पूरा भयो। आउने ४-५ महिनामै तपाईंले पनि छर्लङ्ग हुनेगरि बुझ्नु हुनेछ मेडिकल माफिया र विश्व स्वास्थ्य संगठनको असल उद्देश्य के हो?
मन्त्री महोदय, तपाईंले नै दिएको जानकारीअनुसार नेपालमा विभिन्न मित्र देशले दिएको अनुदान, कोभ्याक्स सुविधा र देशले किनेको गरी झण्डै ९७ लाख खोप भित्रिएको छ। तपाईंले भन्नुभयो ६२ लाख १७ हजार ९९२ डोज वितरीत भयो। यस विषयक थप जानकारी दिँदै तपाईंले हाल केन्द्रीय स्टोर टेकुमा ३ लाख ५० हजार डोज, प्रदेशका स्टोरहरूमा १३ लाख र ७७ वटै जिल्लामा १८ लाख खोप रहेको भन्नुभयो।
मन्त्रीज्यू, ९७ लाख खोपमध्ये तपाईंले ९६ लाख ६७ हजार ९९२ खोपको हिसाब दिनुभयो। जम्मा ३२ हजार ८ खोप अपुग देखियो। जुन खोप एउटा भाइलमा ५-१० को प्याकिङ हुन्छ त्यसमा कम्तिमा पनि ५-७ प्रतिशत ‘इनभिजुअल लस’ हुन्छ। यस हिसाबले कम्तिमा पनि नेपालमा २-३ लाख भ्याक्सिन ‘इनभिजुअल लस’ मा जानुपर्ने हो। तर मन्त्रीज्यूले असार मसान्तमा सरकारी कार्यालयले बजेट मिलान गरेजस्तै भ्याक्सिनको हिसाब मिलान गरिदिनुभयो।
मन्त्रीज्यूले आगामी माघ महिनाभित्र ५ करोड २२ लाख खोप किन्ने बताउनुभयो। झण्डै ९७ लाख खोप आइसकेको अवस्थामा थप ५ करोड २२ लाखको आवश्यकता किन मन्त्रीज्यू? हद्दे भए नेपालको कुल जनसंख्याको ६५-७० प्रतिशतले खोप लाउँछन्/ लाउन मिल्छ मन्त्रीज्यू! यो कति हुन आउँछ यसको हिसाब आफैं गर्नुहोला।
मन्त्रीज्यू थाहा छ तपाईंलाई, फाइजरको भ्याक्सिन नेपालमा उपलब्ध स्टोरेजमा जम्मा एक महिना भण्डारण गर्न मिल्छ भन्ने? मन्त्रीज्यू, तपाईंले सरकारी सुविधा नलिँदैमा नेपाली जनताले केही पाउँदैनन्। नेपाली जनतालाई कोरोनाबाट सुरक्षा चाहिएको छ। भ्याक्सिन एक किसिमको सुरक्षा हो। तर के तपाईंलाई थाहा छ, आजसम्म बनेका सबै भ्याक्सिनको कोरोनाका नयाँ भेरियन्टकाविरुद्धको इफिकेसी ६०-७० प्रतिशत कम भइसकेको छ भन्ने? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तालमा ताल मिलाउँदै तपाईंले पनि कोरोनाविरुद्ध खोप, खोप र खोपको प्रतिबद्धता गाउनु भयो। महाशय, खोपले संक्रमणविरुद्ध एन्टिबडी बनाएर केही आंशिक सुरक्षा दिने हो, संक्रमण हुनबाट रोक्ने होइन। देशले जबसम्म कोरोनाको प्रसार रोक्ने तथा कोरोना भित्रिने जमिनी नाका, हवाई नाकामा कडा एवं उचित व्यवस्थापन गर्दैन तबसम्म जति खोप लगाए पनि (कतिपय देशले तेस्रो बुस्टर डोज लगाएकाे विदित नै होला) कोरोना संक्रमणको ‘चेन’ तोड्न सकिँदैन। यसका लागि भारतको उत्तर प्रदेश र भुटानबाट सिक्न सकिन्छ।
तेस्रो लहरको आगमन भइसकेको छ। मन्त्रीज्यू एउटा च्यालेन्ज स्वीकार गर्नु हुन्छ? नेपालमा कोरोनाको पहिलो तथा दोस्रो लहरमा गरी हालसम्म ९ हजार ८९८ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। ४-५ दिन मै यो दश हजार पुग्छ होला। दश हजारपछि हुने मृत्युलाई तेस्रो लहरमा ‘काउन्ट’ गरौं। तेस्रो लहरको क्षतिलाई १५ हजारभित्रै (तेस्रो लहरमा ५ हजार) सीमित राखौं। महोदय, अब त ६२ लाखलाई भ्याक्सिनेसन भइसकेको छ।
सम्माननीय राज्यमन्त्री महोदय, तपाईंलाई यो लेख आफ्नो विरोध अथवा आलोच्य लागे पनि एकपटक मनन गर्नु होला-भ्याक्सिन अपरिहार्य छ, यसमा कुनै दुई मत हुन सक्दैन। तर, भ्याक्सिनले कोरोना संक्रमणको जोखिम रोक्न सक्दैन। कोरोना संक्रमणको प्रसार रोक्न सक्दैन। यसका लागि जुन उपाय छन् शायद ती तपाईंको अधिकार क्षेत्रमा आउँदैनन्। तपाईंकै कार्यकालमा (५-६ महिनाभित्रै) कोरोना भाइरसको ‘सुपरभर्सन’ देखापर्छ। ५-६ महिनापछि आउने कुराको चर्चा त्यसैबेला गरौँला, अहिले तेस्रो लहरकै विमर्श गरौं।
कोरोनाको डेल्टा र डेल्टा प्लसको स्वरुप पहिलाका कोरोना प्रारूपभन्दा बढी संक्रामक छन्। अहिलेसम्म प्राप्त सूचनाअनुसार घातकतामा भने यी दुवै प्रारूप पहिलाभन्दा बढी खतरनाक होइनन्। नेपालजस्तो देशका लागि जहाँ मेडिकल सुविधा सीमित छन् भाइरसको संक्रामक दर बढी हुनु नै चिन्ताजनक छ। कारण, जति धेरै संक्रमित हुन्छन् त्यसै अनुपातमा मेडिकल सुविधाको आवश्यकता पर्छ। र, यो सुविधा नपाएको खण्डमा निश्चय पनि मृत्यु दर वृद्धि हुन्छ।
समाचारअनुसार, अहिले नै देशका सरकारी अस्पतालमा आइसियु र भेन्टिलेटरको उपलब्धता संकटग्रस्त अवस्थामा पुगिसकेको छ। देशमा अहिले कूल ३०- ३२ हजार सक्रिय संक्रमित छन्। एक महिनापछिको कल्पना गर्नुस्, जुनबेला लाखौं सक्रिय संक्रमित हुन्छन् त्यसबेला कस्तो कोहराम हुनपुग्छ? मन्त्रीज्यूको ध्यान स्वास्थ्य सेवा बढाउनमा केन्द्रीत हुनु पर्ने होइन र? महाशय याद राख्नुस्, भ्याक्सिन लाएको व्यक्तिलाई पनि स्वास्थ्य सुविधा आवश्यक हुन्छ संक्रमित हुँदा।
देशमा जबसम्म कम्तिमा एन्टिजेन परीक्षण सर्वत्र सुलभ र ‘फ्री अफ कस्ट’ हुँदैन तबसम्म आमजनले कोरोना परीक्षणप्रति रूचि र गाम्भिर्यता देखाउँदैनन्।
र, यो काम नभएसम्म संक्रमणको प्रसार किमार्थ पनि रोक्न सकिँदैन। पर्याप्त मात्रामा आइसोलेसन केन्द्र नभएसम्म संक्रमितले घरमा बस्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ, यो नै कोरोना प्रसारको सबैभन्दा सहज कारण बन्नेछ। मन्त्रीज्यू सेवासुविधा लिन्न भन्नुको सट्टा यी कुरामा आफ्नो ध्यान फोकस गरे राम्रो हुन्थ्यो कि!
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ